राजनीति – Laliguransnews
चालक र सरकारबीच वार्ता गर्ने सहमति
नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवसँग वार्ता गर्ने भएको छ। समितिले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा व्यवस्था भएको सवारी ज्यान मुद्दासम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको माग राख्दै विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको सक्रियतामा बिहीबार जितपुरमा भएको छलफलमा समिति र प्रशासनबीच काठमाडौंमा शुक्रबार वार्ता गर्ने सहमति भएको हो।
प्रदेश दुईको विभिन्न स्थानमा राजपालगायत दलहरुले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउँदा मधेश आन्दोलनका अगुवाले भने मृत संविधानको पुनर्जीवन खोज्न नसकिने अवधारणा राखेका छन्। संविधान जारी भएको असोज ३ गते बुधबार वीरगन्जमा आयोजित ‘नेपालको संविधान २०७२ मा जनताको अवधारणा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले संविधानको विरोध गर्नेलाई विखण्डनकारी भनिन्छ तर जसले यो
बेरोजगारले भत्ता प्राप्त गर्ने विधेयक पारित हुने चरणमा पुगेको छ। सरकारले रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न ल्याएको विधेयकमा बेरोजगारलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने प्रस्ताव छ। विधेयक समितिबाट पास भएर संसदमा पुगिसकेको छ। असोज २ गतेभित्रै यसले कानूनी हैसियत समेत प्राप्त गर्दैछ। विधेयक पास भएपछि बेरोजगारले वार्षिक कम्तिमा २२ हजार भत्ता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। तर, भत्ता प्राप्त
जब डा‍. केसी अनसनरत अस्पताल रणभूमि बन्यो…
जुम्ला — बुधबार साँझ सरकारले जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसनरत प्राडा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं लाने निर्णय गरेसँगै डा. केसीका समर्थक र डा. केसी स्वयंलाई सरकारले आफ्ना मागहरुलाई तुहाउने षड्यन्त्र गर्न थालेको भन्ने लागेको थियो । बिहीबार एकबिहानै म कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठाको दोस्रो तत्लामा रहेका प्राडा. केसीलाई भेट्न पुगेको थिएँ। डा. केसीको मुटुको चाल तलमाथि
कांग्रेसको अडानले बैठक स्थगित
प्रतिनिधिसभाको बैठक असार २५ गतेसम्मको लागि स्थगित भएको छ। सरकारले संसदमा जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव आजको कार्यसूचीमा नराखेकोले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गर्दा बैठक २५ गते सम्मको लागि स्थगित गरिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले जुम्लामा अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा माग गर्दै संसदमा जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। त्यस विषयमा
प्रदेश ४ को नाम गण्डकी प्रदेश
प्रदेश ४ को नाम गण्डकी प्रदेश दुई तिहाइले पारित भएको छ। प्रदेश सभामा शुक्रबार भएका ५६ जना सांसदमध्ये ५४ जनाले गण्डकीको पक्षमा मतदान गरेका छन् भने २ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस र जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशमा मतदान गरेका छन् भने नयाँ शक्तिका दुई सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका छन्। बिहिबारको संसद
विश्वका शक्तिशाली नेता भटाभट भ्रष्टाचार आरोपमा थुनिँदै
अपवादबाहेक नेपालमा खरिदार, सुब्बा लगायत तल्लो ओहोदाका कर्मचारीमाथि मात्र भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइए पनि विश्वका शक्तिशाली नेता भटाभट भ्रष्टाचार आरोपमा थुनिँदै छन् । कतिपयले आरोपकै आधारमा पद त्याग गरेका छन् भने धेरैले भ्रष्टाचारीको दागसहित आजीवन कैद बस्नुपरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यूरोको रिपोर्ट – मलेशियाको सत्ताराजनीतिमा ६ दशकभन्दा बढी एकछत्र प्रभाव जमाएका पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाकमाथि करिब ७५